Wararka - Saamiga shaashadda shaashadda taleefanka gacantu ka dib, halkee ayuu ku dambeyn doonaa shaashadda shaashadda taleefanka gacantu
Ka dib saamiga shaashadda shaashadda taleefanka gacanta, halkee ayuu ku dambeyn doonaa shaashadda shaashadda taleefanka gacanta
Cabbirku had iyo jeer wuxuu ahaa jihada muhiimka ah ee horumarinta shaashadda taleefanka gacanta, laakiin taleefanka gacanta oo in kabadan 6.5 inji ah kuma haboona hal gacan qabasho. Sidaa darteed, ma adka in la sii wado ballaadhinta cabirka shaashadda, laakiin inta badan noocyada taleefannada gacanta ayaa ka tanaasulay isku dayga noocaas ah. Sidee loo sameeyaa maqaal ku saabsan shaashadda cabbirka go'an? Sidaa darteed, waxay noqoneysaa mudnaanta koowaad si loo kordhiyo saamiga shaashadaha.
Xagee ayuu ku dambeyn doonaa shaashadda taleefanka gacanta kadib marka loo eego saamiga shaashadaha
Fikradda wadaagga shaashadda maahan mid cusub. Noocyo badan ayaa sheekooyin ka sheegaya arrintan tan iyo dhowrkii sano ee ugu horreeyay markii taleefannada casriga ahi markii ugu horreysay soo muuqdeen. Si kastaba ha noqotee, wakhtigaas, saamiga shaashadda wuxuu ka badnaa oo keliya 60%, laakiin hadda soo bixitaanka shaashadda dhammaystiran ayaa ka dhigaysa saamiga shaashadda taleefanka gacantu ka badan yahay 90%. Si loo hagaajiyo saamiga shaashadda, naqshadeynta kamarad qaadista ayaa ka muuqata suuqa. Sida iska cad, saamiga shaashadda ayaa noqday jihada ugu weyn ee ugu fiicnaanta shaashadda taleefanka gacanta labadii sano ee la soo dhaafay.
Telefoonada gacanta ee shaashadda buuxa ayaa noqda kuwo caan ah, laakiin waxaa jira xaddidan hagaajinta saamiga shaashadaha
Si kastaba ha noqotee, culeyska hagaajinta saamiga shaashadaha ayaa iska cad. Sidee ayaa shaashadaha moobiilku u horumari doonaan mustaqbalka? Haddii aan fiiro gaar ah u yeelanno u kuurgalka, waxaan ogaaneynaa in wadada xallinta ay muddo dheer qodxan ku daboolayeen. Shaashadda taleefanka gacanta 2K ayaa ku filan, mana jirto saameyn muuqata oo ku saabsan cabbirka 6.5 inji oo leh xallinta 4K. Ma jiraan qol loogu talagalay horumarinta cabbirka, xallinta iyo wadaagga shaashadda. Ma waxaa hadhay hal kanaal oo midab leh?
Qoraagu wuxuu qabaa in shaashadda taleefanka gacanta ee mustaqbalka ay inta badan ka beddelan doonto laba dhinac oo ah walxo iyo qaab-dhismeed. Kama hadli doono shaashadda buuxda. Tani waa isbeddelka guud. Mustaqbalka, dhammaan taleefannada gacanta ee heerka gelitaanka waxaa lagu qalabeyn doonaa shaashad buuxda. Aynu ka hadalno tilmaamaha cusub.
Waxyaabaha loo yaqaan 'OLED PK qled qled' ayaa noqda jihada cusbooneysiinta
Iyadoo horumarka joogtada ah ee shaashadda OLED, adeegsiga shaashadda OLED ee taleefanka gacanta ayaa noqotay mid caadi ah. Xaqiiqdii, shaashadda OLED ayaa ka soo muuqday taleefannada gacanta dhowr sano ka hor. Dadka aqoonta u leh HTC waa inay xasuusnaadaan in HTC one s uu adeegsado shaashadda OLED, Samsungna waxay leedahay taleefannada gacanta badan oo isticmaala shaashadaha OLED. Si kastaba ha noqotee, shaashadda OLED ma aysan bislaanin waqtigaas, muujinta midabkuna ma ahayn mid qumman, taas oo had iyo jeer dadka siisa dareenka "wax qurxiyo oo culus". Xaqiiqdii, taasi waa sababta oo ah nolosha walxaha OLED way ka duwan yihiin, iyo nolosha qalabka OLED oo leh midabbo kala duwan oo aasaasi ah way ka duwan tahay, markaa saamiga agabyada OLED-ga ee muddada gaaban jira ayaa ka sii badan, sidaa darteed waxqabadka guud ee midabka ayaa saameyn ku leh.
Telefoonada HTC one s waxay mar horeba isticmaalaan shaashadaha OLED
Hadda waa ka duwan tahay. Shaashadda OLED way bislaanayaan kharashkuna hoos buu u dhacayaa. Laga soo bilaabo xaaladda hadda jirta, oo leh tufaax iyo dhammaan noocyada taleefannada calaamadaha loogu talagalay shaashadda OLED, horumarinta warshadaha OLED waxay ku dhowdahay inay dardar gasho. Mustaqbalka, shaashadda OLED waxay sameyn doontaa horumar weyn xagga saamaynta iyo kharashka. Mustaqbalka, waa isbeddelka guud ee taleefannada gacanta ee ugu sarreeya si loogu beddelo shaashadda OLED.
Waqtigan xaadirka ah, tirada taleefannada shaashadda ee OLED ayaa sii kordhaya
Marka lagu daro shaashadda OLED, waxaa jira shaashad qled ah. Labada nooc ee shaashadda ah ayaa runtii ah waxyaabo is-dhalaalaya, laakiin dhalaalka shaashadda qled-ka ayaa ka sarreeya, taas oo ka dhigi karta sawirka mid u muuqda mid hufan. Waxqabadka gamut oo isku mid ah, shaashadda qled ayaa leh "indho qabasho" saameyn.
Marka loo eego, cilmi baarista iyo horumarinta shaashadda qled ayaa dib uga dhacaysa xilligan. In kasta oo ay jiraan TVyo qled ah oo suuqa ku jira, haddana waa farsamo u adeegsanaysa walxaha qled-ka si ay u sameyso modules-ka dhabarka oo ay u sameyso nidaam cusub oo nalka dambe ah iyada oo loo marayo kicinta buluugga ah ee buluugga ah, taas oo aan ahayn shaashad dhab ah oo qled ah. Dad badan ayaan si cad uga caddayn arrintan. Waqtigan xaadirka ah, noocyo badan ayaa bilaabay inay fiiro gaar ah u yeeshaan cilmi baarista iyo horumarinta shaashadda dhabta ah ee qled. Qoraagu wuxuu saadaaliyay in shaashadan nuucaan ah ay u badan tahay in marka hore lagu dhaqo shaashadda moobiilka.
Jihada isku daygii ugu dambeeyay ee dalabka isku laaban ayaa u baahan in la xaqiijiyo
Hadda aan ka hadalno dhismaha. Dhawaan, madaxweynaha Samsung wuxuu ku dhawaaqay in taleefankiisii ​​ugu horreeyay ee la laaban karo la sii deyn doono dhammaadka sanadka. Yu Chengdong, oo ah agaasimaha guud ee ganacsiga macmiisha ee Huawei, ayaa sidoo kale sheegay in taleefanka gacanta ee isku laaban uu ku jiro qorshaha shirkadda Huawei, sida ay qortay majaladda Jarmalka welt. Isku laabidda jihada mustaqbalka ee horumarinta shaashadda moobaylka?
Haddii qaabka taleefanka gacantu isku laaban yahay uu caan u yahay weli wuxuu u baahan yahay in la xaqiijiyo
Shaashadda OLED way rogrogmi karaan. Si kastaba ha noqotee, tiknoolijiyada substrate-ka jilicsan ma bisla. Shaashadda OLED ee aan aragno ayaa badanaa codsiyada fidsan. Telefoonka gacanta ee isku laaban wuxuu u baahan yahay shaashad aad u jilicsan, taas oo si weyn u hagaajineysa dhibaatada soo saarista shaashadda. In kasta oo shaashadaha noocan oo kale ah hadda la heli karo, haddana ma jiraan wax dammaanad qaad ah oo si gaar ah ugu filan.
Waxaan filayaa in laalaabidda taleefannada gacanta aysan noqon doonin kuwa guud
Laakiin shaashadda dhaqameed ee LCD ma gaari karto shaashad jilicsan, kaliya saamaynta dusha sare ee qalooca. Qaar badan oo ka mid ah bandhigyada E-isboortiga ayaa ah naqshad qalooca, dhab ahaantii, waxay isticmaalaan shaashadda LCD. Laakiin taleefannada qalooca ayaa caddeeyay inaysan ku habbooneyn suuqa. Samsung iyo LG waxay soo saareen taleefannada gacanta ee qalooca, laakiin jawaabta suuqa ma weyna. Isticmaalka shaashadda LCD si aad u sameysid taleefannada gacanta ee isku laaban waa inay lahaadaan xirmo, taas oo si weyn u saameyn doonta khibrada macaamiisha.
Qoraagu wuxuu qabaa in laabashada taleefanka gacantu wali u baahan yahay shaashadda OLED, laakiin in kasta oo laabashada taleefanka gacantu u muuqdo mid qabow, waxay kaliya beddel u noqon kartaa taleefanka gacanta ee caadiga ah. Qiimaheeda qaaliga ah awgood, xaalado codsi oo aan caddayn, iyo dhibaatada soo saarista wax soo saarka, ma noqon doonto mid guud sida shaashadda oo dhan.
Xaqiiqdii, fikradda shaashad dhammaystiran wali waa marinka dhaqameed. Nuxurka saamiga shaashadda ayaa ah in la isku dayo in lagu wanaajiyo saameynta muujinta meel cabbir gaar ah leh marka cabirka taleefanka gacantu uusan sii wadi karin ballaarinta. Iyada oo ay caan ku tahay alaabada shaashadda buuxda, shaashadda buuxda ma noqon doonto dhibic xiiso leh dhowaan, maxaa yeelay alaabooyin badan oo heer-gal ah ayaa sidoo kale bilaabaya inay qaabeeyaan nashqada shaashadda oo dhan. Sidaa darteed, mustaqbalka, maaddada iyo qaab-dhismeedka shaashadda ayaa loo baahan yahay in wax laga beddelo si loo sii daayo in shaashadda taleefanka gacanta ay u yeeshaan waxyaabo cusub. Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira farsamooyin badan oo ka caawin kara taleefannada gacanta inay ballaariyaan saamaynta muuqaalka, sida tikniyoolajiyadda saadaasha, tikniyoolajiyada 3D ee qaawan, iwm., Laakiin teknoolojiyadaani waa la'aanta xaaladaha loo baahan yahay ee loo adeegsado, teknoolojiyaduna ma bislaanin, sidaa darteed way Noqon mayso jihada guud ee mustaqbalka.